​Murashaxiin Afar ah oo war-saxaafadeed kasoo saaray shir ay ku yeesheen Nairobi [Daawo+Akhriso]
​Murashaxiin ku shiray Kampala [Daawo+Akhriso]
NAIROBI, Kenya- Afar murashax oo kamid ah mas'uuliyiinta u taagan xilka Madaxweynaha dowladda Federaalka Somalia, ayaa war-saxaafadeed kasoo saaray shir ay ku yeesheen magaalada Kampala ee dalka Uganda oo ay uga hadlayeen doorashooyinka dalka.
Murashaxiinta kala ah; Sheekh Shariif Sheekh Axmed, Cabdulqaadir Faarax Shirdoon Saacid, Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Farole iyo Cabdinaasir Maxamed Cabdulle, waxay hambalyo ugu direen Barlamanka cusub iyo doorashadii Guddoonka golaha shacbiga iyagoo ugu baaqay inay ku dadaalaan sidii dalka looga samata bixin lahaa dhibaatooyinka ragaadiyay.
Waxay sidoo kale war-murtiyeedkooga baaq ugu direen beesha caalamka gaar ahaan xubnaha sida tooska ah faraha ugula jira doorashada, waxayna ka codsadeen inay xurmeeyaan madaxbanaanida Somalia.
"Waxaan ugu baaqaynaa dawladaha shisheeye ee faragalinta ku haya hannaanka doorashada dalka in ay faraha kalabaxaan, xurmeeyaan madax-banaanida dalka, islamarkaana la xaqiijiyo in doorashadu kudhacdo caddaalad iyo hufnaan,"Ayaa lagu yiri qoraalka murashaxiinta.
Abaarta ka jirta Somalia, ayaa shirkaasi lagusoo hadal qaaday, waxayna baaq u direen dhammaan umadda Somaliyeed kuwooda wax haysta iyagoo ka dalbaday inay gurmad lasoo gaaraan dadka tabaalaysan ee jiilaalka baahsani saameeyay.
Waxay sidoo kale ka hadleen xaaladda siyaasadeed ee maamulka Galmudug, oo ay sheegeen inay aad uga xunyihiin, waxayna ku baaqeen in wixii jira lagu dhammeeyo si waafaqsan dastuurka u yaalla maamul goboleedkaasi.
"Waxaannu aad uga xunnahay khilaafka siyaasadeed ee ka taagan maamul goboleedka Gal-Mudug, waxaannu ugu baaqaynay in arrinta sinabadgelyo ah oo waafaqsan Dastuurka maamul goboleedka lagudhammeeyo,"Sidaas waxaa lagusoo afmeeray qodobo kamid ah war-murtiyeed kasoo baxay shirka murashaxiinta Madaxweynaha Somalia.
War-saxaafadeedkan, ayaa yimid xilli maalintii khamiista ee lasoo dhaafay lasoo afmeeray doorashada Guddoonka golaha shacabka Somalia, waxaana hadda la sugayaa doorashada Madaxweynaha oo lagu wado inay qabsoonto dhammaadka bisha January, 2017.
​Jawaari oo beeniyay inuu khadka teleefonka uga qayb galay kulan Madashu ka yeelatay arrinta Galmudug
MUQDISHU, Somalia- Guddoomiyaha Barlamanka Federaalka Somalia, Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa beeniyay inuu khadka taleefonka uga qayb galay shir hogaamiyaasha Madashu ka yeesheen xaaladda murugsan ee maamulka Galmudug
Wasiirrada Somalia oo la dhaariyay
​Jawaari oo la kulmay xubno katirsan beesha Caalamka iyo murashaxiinta Madaxweynaha Somalia
​Muudeey iyo Mahad oo loo doortay ku-xigeennada Guddoomiyaha Barlamanka Somalia
Wasiirrada Soomaaliya oo ansixiyay xubin kamid ah Guddiga Dastuurka 24.11.2017. 00:27
Xawaaladda AMAL oo tababar siisay Wakiilladeeda Sweden 24.11.2017. 00:22
Rwanda: Kama aamusi karno Adoonsiga ka socda Liibiya 23.11.2017. 23:59
WARBIXIN: MD. Cusub ee Somaliland iyo Guddoomiyaha Wadani oo kulmay 23.11.2017. 22:21
Burcad-badeed lagu qabtey Xeebaha Soomaaliya oo la geeyay Seychelles 23.11.2017. 21:37
Khasaaraha dagaalkii ka dhacay Gaalkacyo oo kordhay 23.11.2017. 18:54